सकियो कुलमानको कार्यकाल, अब विकल्प को?
नेपाल लाइभ आइतबार, भदौ २८, २०७७, १७:०८
काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। २०७३ भदौ २९ गते ४ वर्षका लागि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्त भएका घिसिङको कार्यकाल आइतबार सकिएको हो।
घिसिङको कार्यकाल सकिन लागेसँगै उनलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी प्रमुखमा दोहोर्‍याउनुपर्ने सार्वजनिक दबाब बढेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारले भने उनको पुनर्नियुक्तिको औपचारिक प्रस्ताव तयार गरेको छैन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने बताए पनि औपचारिक प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छैनन्। उनले यसअघि गत सोमबार, बिहीबार, शुक्रबार र त्यति नभए आइतबार भए पनि प्रस्ताव लैजाने बताएका थिए।
को को छन् प्रतिस्पर्धामा?
घिसिङको कार्यकाल सकिने दिनसम्म पनि उनलाई विस्थापित गर्ने अनुहार सार्वजनिकरूपमा बाहिर आएको छैन। तर ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक निवनराज सिंहले लबिङ गरिरहेका छन्।
सिंह दोहोर्‍याएर विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक भएका व्यक्ति हुन्। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव उनलाई मन्त्री पुनले नै दोस्रोपटक त्यहाँ पठाएका थिए।
यसैगरी शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्दशक हुन्। उनी अहिले एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी (प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्।
के के गरे घिसिङले?
चार वर्षको कार्यकालमा घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा 'माइलस्टोन' तय गरिदिएका छन्। त्यसका अतिरिक्त केही रुग्ण आयोजना सम्पन्न गराएका छन्। माथिल्लो त्रिशुली, चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजना घिसिङकै कार्यकालमा सम्पन्न भएको छ। प्रसारण लाइनतर्फ काबेली करिडोरको काम सम्पन्न भएको छ।
वितरण प्रणाली सुधारका लागि सबस्टेसन निर्माण र वितरण लाइन सुधारका काम अघि बढाइएको छ। काठमाडौंबाट विद्युत तार भूमिगतको काम अघि बढाइएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट यही डिसेम्बरभित्रमा विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेका छन्। यसैगरी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीअन्तर्गत ४ वटा आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
घिसिङले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा 'यु-टर्न' ल्याइदिएका छन्। आफू कार्यकारी निर्देशक हुँदा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ सञ्चित नोक्सानमा रहेको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ खुद नाफा गरेको छ। ४ वर्षअघि २८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट यसवर्ष १५.७ प्रतिशतमा झरेको छ।
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानले के गरे, के गरेनन्? समर्थन र विरोध शृंखलाको ४ वर्षे समय रेखाबिहीबार, भदौ २५, २०७७
डोटीका स्थानीय तहमा विद्युत विस्तार हुँदै बुधबार, कात्तिक १२, २०७७